SAWIRRO: Turkiga oo agab caafimaad oo aanu horay u keenin mudadii karoonaha Muqdisho u duuliyey (Maxaa ka mid ah?) | Hadalsame Media
”Doorashadu waa ku celis haddii kale waa DAGAAL SOKEEYE!” – Siyaasiyiin…
Home Arrimaha Caalamka SAWIRRO: Turkiga oo agab caafimaad oo aanu horay u keenin mudadii karoonaha...
SAWIRRO: Turkiga oo agab caafimaad oo aanu horay u keenin mudadii karoonaha Muqdisho u duuliyey (Maxaa ka mid ah?)
(Ankara) 04 Maajo 2020 – Turkey ayaa shixnad ka kooban agab caafimaad muhim ah oo aanu keenin tan iyo bilowgii karoonaha haatan u duuliyey Muqdisho oo iminka ah halka ugu daran dalka dhanka covid-19.
Dayuurad ciidan oo xamuul ah nooca A-400M oo sidda waxyaabo ay ka mid yihiin bareellayaal, sariiro, bustayaal iyo agabyo kale oo asaasi ah ayaa ka duushay gegada ciidanka cirka ee Etimesgut ee Ankara.
Turkiga ayaa Sabtigii dorraad ahayd Muqdisho ka dejiyey waxyaabo ay ku jireen neef-siiye uu isagu farsameeyey, taasoo ahayd markii ugu horreeysey oo uu dibedda u diro.
Waxaa agabkan caafimaad oo lagu dhejiyey calamada Somalia iyo Turkiga lagu qoray halku dhegga mufti suufi ahaa oo noolaa qarnigii 13-aad, Mevlana Rumi: “Waxaa jirta rejo quusta kaddib, iyo qorrax badan Mugdiga kaddib.”
Previous articleXORRIYADDA SAXAADADDA: Hal arrin oo ay muhim tahay in la isla fahmo
Next articleQadar oo Somalia u muujisay inaysan ahayn saaxiib kal iyo laab ah (Arag waxa ay samaysay ilaa haatan)
”Doorashadu waa ku celis haddii kale waa DAGAAL SOKEEYE!” – Siyaasiyiin waawayn & dhaqdhaqaaqyo Trump kula taliyey inuu soo rogo xukun millateri dastuurkana xannibo
(Nairobi) 03 Dis 2020 - Sii xirnaanshiyaha suuqa Jaadka ee Somalia ayaa jug dhaqaale oo ballaaran u gaystey kumannaan qof oo Kenyan ah, sida...